> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si Canon PowerShot S95
Enwere m ike Naghachi ehichapụ Photos si Canon PowerShot S95?
Mgbe m na-ihichapụ achọghị foto site na m Canon PowerShot S95. Ma m nnọọ ehichapụ ụfọdụ dị mkpa photos carelessly. M na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ekwe omume n'ihi na m iji weghachi ha. Biko ndụmọdụ. Daalụ nke ukwuu.
Mberede nhichapụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị mere maka foto ọnwụ. Otú ọ dị, otu nkweta nke furu efu photos bụ na ha ga ọli ọ bụrụ na ha na-agaghị na overwritten site ọhụrụ data na gị nchekwa na ngwaọrụ. Nke a na-eme ka o kwe gị omume naghachi foto site na Canon PowerShot S95 ka ogologo oge ị kwụsị iji igwefoto gị.
Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ a pụrụ ịdabere mgbake ngwa na-enyere gị aka naghachi furu efu, ehichapụ, Ị na rụrụ arụ foto site na Canon PowerShot S95 igwefoto dijitalụ n'ime 3 mfe nzọụkwụ. Ọ bụ na-enwe ike naghachi ọdịyo faịlụ na vidiyo si na gị igwefoto kwa. Niile i nwere ime bụ ike iṅomi ya na nke a na omume na mgbe ahụ naghachi hụrụ photos.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke usoro ihe omume n'okpuru.
Naghachi Photos si Canon PowerShot S95 na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a ka na-amalite Canon PowerShot S95 foto mgbake na Windows Version nke Wondershare Photo Recovery. Mac ọrụ nwere ike iso yiri nzọụkwụ na Mac version kwa.
Cheta na: Biko jikọọ gị Canon PowerShot S95 ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị na-amalite.
Nzọụkwụ 1 Mgbe launching Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị, ị ga-ahụ a window dị ka ndị na. Usoro ihe omume ga-egosi niile na-akwado ngwaọrụ a na window. Na ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na-amalite dum usoro.
Nzọụkwụ 2 Lee ngwa ga-akpaghị aka ịchọpụta na-show partitions / draịva na kọmputa gị. Ị na mkpa iji họrọ otu maka gị Canon PowerShot S95 na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu Foto ndị dị na ya.
Nzọụkwụ 3 Hụrụ faịlụ gị Canon PowerShot S95 ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ga-egosipụta na 3 edemede mgbe scanning: "Photo", "Audio" na "Video".
Ị nwere ike ịhọrọ "Photo" Atiya Ka ịhụchalụ hụrụ oyiyi ka ego otú ọtụtụ nke furu efu photos nwere ike gbakee.
Ị nwere ike naghachi ehichapụ foto site na Canon PowerShot S95 mgbe ahụ: akara foto na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị na-Natara photos na gị na Canon PowerShot S95 n'oge mgbake usoro.